गणतन्त्रविरोधीहरुले राष्ट्रपतिको विरोध गरे- प्रधानमन्त्री ओली — Imandarmedia.com
१हाल ५० लाख डोज कोभिसिल्ड खरिद गर्ने अवस्था छैन: स्वास्थ्य मन्त्रालय
२बालबालिकामा कोभिड सङ्क्रमण बढ्दो, जोगाउन चिकित्सकको यस्तो छ सुझाव
३चीनको अनियन्त्रित रकेट पृथ्वीमा खस्ने खतरा,बिस्वभर त्रास
४प्रहरी र तस्क’रबीच गो’ली हा’नाहा’न, कम्तीमा २५ जनाको मृ’त्यु
५के भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी अब ओरालो लाग्न लागेको हो?
६राष्ट्रियसभा सदस्यमा बादल सहित तीन जनाको उम्मेदवारी
७रसियन स्पुतनिक खोप ल्याउन नेपाल सरकारले कसलाई दियो अनुमति
८निषेधाज्ञामा बढी भाडा लिनेह ३ जना पक्राउ
९राष्ट्रपतिलाई माधव नेपालले दिए यस्तो जवाफ
१०गण्डकीमा कोरोना संक्रमणबाट थप ४ जनाको मृत्यु
११बिल गेट्सले डिभोर्स गरेकी श्रीमती मेलिन्डाको नाममा ट्रान्सफर गरे यति धेरै सम्पति र खाेले यस्ताे बेग्लै रहस्य
१२नेपाली भौतिकशास्त्री साहुले अमेरिकामा पाए साढे ३ करोडको अवार्ड
गणतन्त्रविरोधीहरुले राष्ट्रपतिको विरोध गरे- प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र विरोधहरुले नै राष्ट्रपतिको विरोध गरेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्दै पछिल्लो समय ससाना विषयमा पनि राष्ट्रपति जस्तो निष्पक्ष र मर्यादित संस्थामाथि आक्रमण हुने गरेको भन्दै त्यसकिसिमका कार्यमा संलग्नहरु गणतन्त्र विरोधी भएको बताएका हुन् ।
राष्ट्रपतिको विरुद्ध लगातार,अनवरत, हरेक स–साना निहुँमा आक्रमणको तारो बनाइन्छ । मैले त्यसलाई गणतन्त्र विरुद्धको एउटा साजिसको रुपमा मात्रै, गणतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र गणतन्त्र ठिक होइन भन्ने कुरालाई लैजाने रुपमा बुझेको छु । के गर्नुपथ्र्यो त राष्ट्रपतिले ? चुपलागेर बस्ने राष्ट्रपति चुप लागेर बस्या छ । त्यो भन्दा बढी राष्ट्रपतिले के गर्नुपथ्र्यो ?”
उनले राष्ट्रपतिलाई निष्पक्ष मर्यादित संस्थाको रुपमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रप्रमुख तर कार्यकारी अधिकार नभएको राष्ट्रपतिको रुपमा सम्मानित संस्थाको रुपमा राख्ने गरिएको भन्दै उनले जुनसुकै विषयमा सम्मानित संस्थामाथि आक्रमण गरिनु नहुने भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति छोड्न आग्रह गरे ।
उनले भने, “गणतन्त्रको विरोध गर्नेहरु राष्ट्रपतिमाथि खनिने गरेका छन् । कार्पेट कहाँनेर राखियो प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउँछ ? त्यो गर्ने काम हो प्रधानमन्त्रीको ? जेमा पनि राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने र दलगत रुपले हेर्ने कुरा उचित होइन । दुवो काटेर चौरी चिटिक्क पारियो । अहिले चौरी चिटिक्क पार्ने कि कोरोनाका विरुद्ध लड्ने भन्ने ? अनि राष्ट्रपतिले कोरोनाका विरुद्ध नलड चौरी चिटिक्क पार् भन्या हो र ? ”
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न भएको खर्चमा अनियमितता गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधाबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सांसदहरूले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा अनियमितता भएको भनेर उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै त्यसो गरेको पाइएमा कानुनको कठघरामा उभ्याइने बताएका हुन् ।
केही सांसदहरूले जे कुरामा पनि अनियमितता भएको आरोप लगाउने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि पनि जनाएका थिए । सांसदहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा अनियमितता भएको र केही कर्मचारीलाई सरुवा गरेर त्यसबाट जोगिन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कतिपयले यसमा अनियमितता भयो भन्ने सुनेका कुराहरूलाई उठाउनुभएको छ । कतिपयले यस्तो भन्ने रुचि पनि राख्नुहुन्छ, जेमा पनि अनियमितता भयो भन्ने र लान्छित गर्ने गर्नुहुन्छ । त्यसमा भर नपर्न आग्रह गर्दछु ।’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कुनै पनि अनियमितता, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचारजस्ता कुराहरू सरकारले सहँदैन। छानबिन गर्छ, कारबाही गर्छ । कठघरामा उभ्याइन्छ । दोषी पाइएमा दण्डित गरिन्छ ।’
बालबालिकामा कोभिड सङ्क्रमण बढ्दो, जोगाउन चिकित्सकको यस्तो छ सुझाव